पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य कति बढ्यो ? हेर्नुहोस मुल्य सुची – kalikadainik.com
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य कति बढ्यो ? हेर्नुहोस मुल्य सुची
बुधबार, पौष १६, २०७६ | १९:५३:३९ |
काठमाडौं, १६ पुस। पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य नेपाल आयल निगमले बढाएको छ। जसअनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँले बढेको छ।
भारतबाट केही मूल्य बढेर आएकाले स्वचालित प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। हवाई ईन्धन र एलपी ग्यासको खुद्रा विक्री मूल्य हालकै यथावत राखिएको छ। अब काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ११ रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
बढेको मूल्य बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने निगमले जनाएको छ। उपरोक्त समायोजन पश्चात् काठमाडौंसहित सुर्खेत र दिपायलमा १११ रुपैयाँ प्रति लिटर पर्नेछ। पोखरा र दाङमा ११० रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर र अन्य तराई क्षेत्र (चारआली, विराटनगर, धनुषा, विरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज र धनगढी)मा प्रतिलिटर १०९ रुपैयाँ ५० पैसा पर्नेछ।